Thwebula Viber 6.3.1.63 isizulu – Android – Vessoft
Lokhu software lokubhalisa edingekayo at umakhalekhukhwini
Viber – ikuvumela ukuba uxoxe abasebenzisa software ngokwenze amakholi nokubhala imiyalezo nge-inthanethi. Isofthiwe liqhuba ukuvumelanisa of incwadi yocingo bese ngokuzenzakalelayo kuthola oxhumana lapho le software efakwe. Viber kwenza ukwenza izingcingo Movie kanye ninalo ngamazinga aphansi. Isofthiwe ikuvumela abasebenzisi ukuthumela stickers, izithombe, izwi noma video imiyalezo thwebula imidlalo. Viber kwenza ukujoyina izingxoxo popular ukubuka ulwazi mayelana osaziwayo noma abangane.
Ukwenza eliphezulu izwi izingcingo
Ukwabelana imiyalezo futhi amafayela
Izingcingo on mobiles and ninalo amafoni
Amazwana on Viber:
Viber Ahlobene software: